ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ဝယ်သူအကောင့် ကြော်ငြာရှင်အကောင့် sell property
အိမ်ခြံမြေပြပွဲများ အိမ်ခြံမြေလမ်းညွှန် ART OF LIVING သတင်း အကျိုးဆောင်များ Careers
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ကမာကြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ မီနီကွန်ဒို အခန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော တိုက်ခန်း
► Only 30% Bank Transfer ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
► BCC Finished
► ( 19' x 54' )
► Mini Condo
► Lift Card System
► 1 Master Bedroom , 1 Bedroom
► Living Room & all bedrooms with Korea Parquet
► Bathroom & Toilet with tile
► Kitchen Cabinet with tile.
မြို့ ၊ မြို့နယ်
ကမာကြည်လမ်းမကြီး ၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် ၊ သုဝဏ္ဏ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
အရောင်းစျေးနှုန်း 1,100 သိန်း မှစတင်ပါသည်
► ( 19' x 54' ) ► Mini Condo ► Lift Card System ► Generator ► Car Parking ► 1 Master Bedroom , 1 Bedroom ► Living Room & all bedrooms with Korea Parquet ► Bathroom & Toilet with tile ► Kitchen Cabinet with tile.
အခန်း နှင့် ဈေးနှုန်းများ
► #2( L ) - 1100 Lakhs ► #3( L ) - 1100 Lakhs ► #4( L / R ) - 1100 Lakhs ► #5( L / R ) - 1100 Lakhs ► #6( L / R ) - 1100 Lakhs ► #7( L / R ) - 1100 Lakhs ► # Penthouse - 2700 Lakhs
► Thunawa Market ► Thunawa Myo Oo Pagoda
ShweProperty Project Salesဖုန်းဆက်ရန်
ဒီအိမ်ခြံမြေကို စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဒီအိမ်ခြံမြေနှင့်ပါတ်သတ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားပေးပို့စေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Keep me updates with real estate news
အခြား အိမ်ခြံမြေ များ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ( ငမိုးရိပ် ၈ လမ်း )မှ ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ အရောင်း
သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် ( ကန်တော်လမ်း ) တွင်မြေညီထပ်အခန်းလေးရောင်းရန်ရှိ
သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ စံပြဈေးအနီး ( ငမိုးရိပ် ၉ လမ်းမှ ) အသင့်နေတိုက်ခန်းအရောင်း
သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ငမိုးရိပ် ( ၉ ) လမ်းမှ အဆင့်မြင့် (BCC) ကျပြီးတိုက်ခန်းများအရောင်း
ငမိုးရိပ် ( ၈ ) လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသောအသင့်နေ မြေညီတိုက်ခန်းများ
သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ငမိုးရိပ် ( ၈ ) လမ်း မှရောင်းရန်ရှိသော မြေညီတိုက်ခန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ရိပ်သာလမ်း ( လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် ) မှ ( 11.5' x 48' ) အကျယ်အဝန်းရှိ ဘဏ်ချိတ်ရ မြေညီတိုက်ခန်း
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
မန္တလေးတိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
နေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ဧရာဝတီရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ပဲခူးတိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
မကွေးတိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
မန္တလေးတိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
နေပြည်တော်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ပဲခူးတိုင်းရှိ ငှာရန် အိမ်ခြံမြေများ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကယားပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
မကွေးတိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
မန္တလေးတိုင်းရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
နေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ဧရာဝတီတွင်ရှိ ရောင်းရန် စီမဲံကိန်းများ
ပဲခူးတိုင်းရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ကယားပြည်နယ်တွင် ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
မကွေးတွင် ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ရောင်းရန် စီမံကိန်းများ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် စက်မှု့ဇုံများ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ဆိုင်ခန်းများ
ရန်ကုန်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှု့ဇုံများ
ရန်ကုန်ရှိ ငှားရန် စက်မှု့ဇုံများ
ရန်ကုန်ရှိ ရောင်းရန် ဆိုင်ခန်းများ
Copyright © 2011-2021, ShweProperty.com. All rights reserved.
သင့်စိတ်ကူးထဲက အိမ်လေးတစ်လုံးကို ရှာဖွေလိုက်ပါ...
No Min 100 သိန်း 200 သိန်း 300 သိန်း 400 သိန်း 500 သိန်း 600 သိန်း 700 သိန်း 800 သိန်း 900 သိန်း 1000 သိန်း 1500 သိန်း 2000 သိန်း 2500 သိန်း 3000 သိန်း 3500 သိန်း 4000 သိန်း 4500 သိန်း 5000 သိန်း 6000 သိန်း 7000 သိန်း 8000 သိန်း 9000 သိန်း 10000 သိန်း 15000 သိန်း 30000 သိန်း
No Min 1 သိန်း2သိန်း3သိန်း4သိန်း5သိန်း6သိန်း7သိန်း 8 သိန်း9သိန်း 10 သိန်း
No Max 100 သိန်း 200 သိန်း 300 သိန်း 400 သိန်း 500 သိန်း 600 သိန်း 700 သိန်း 800 သိန်း 900 သိန်း 1000 သိန်း 1500 သိန်း 2000 သိန်း 2500 သိန်း 3000 သိန်း 3500 သိန်း 4000 သိန်း 4500 သိန်း 5000 သိန်း 6000 သိန်း 7000 သိန်း 8000 သိန်း 9000 သိန်း 10000 သိန်း 15000 သိန်း 30000 သိန်း 30000 (သိန်း) နှင့်အထက်
No Max 1 သိန်း2သိန်း3သိန်း4သိန်း5သိန်း6သိန်း7သိန်း 8 သိန်း9သိန်း 10 (သိန်း) နှင့်အထက်
Mobile : 09958777888
Office No : 09958777888
ယခုရုံးချိန်ပြင်ပ/ ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်နေပါသဖြင့် လူကြီးမင်း၏ နာမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ပေးပို့ထားနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှ လူကြီးမင်းတို့ထံ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါမည်။